बिहेअघि नै शा’रिरिक सम्प’र्क भए नभएको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ? – Sandesh Press
बिहेअघि नै शा’रिरिक सम्प’र्क भए नभएको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ?
September 1, 2021 365
विवाहको अर्थ दुई व्यक्ति एक हुनु मात्र नभएर उनीहरुको विश्वास, एकअर्काप्रतिको सम्मान, माया, प्रेम र दुई परिवारप्रतिको दायित्व पनि बराबर हुनु हो । तर कहिलेकाहीँ विवाह अगाडीको कुरालाई लिएर वि’वाद तथा दाम्पत्य जीवनमा द’रार आएका घ’टनाहरुपनि छ्या’प्छ्याप्ती सुनिन्छ ।
प्रश्न : बिहेअघि से’क्स गरेको थाहा हुन्छ कि हुँदैन से’क्स गरेमा यो’नी खु’कुलो हुन्छ भनेको सुनेको छु । वास्तविकता के हो ? म निकै त’नावमा छु ।
जवाफ : महिलाले विवाहअगाडि यौ’नस’म्पर्क राखे÷नराखेको कुरा थाहा पाउन सामान्य मान्छेले पहिलो यौ’न स’म्पर्कको बेला रगत आए/नआएको वा दु’खे/नदु’खेको कुरालाई आधार मानेर हेर्ने, सोच्ने र बुझ्ने गरेको पाइन्छ ।
अर्कातिर पुरुषमा लिं’गको अगाडिको छाला फा’टे/नफाटेको, पछाडिसम्म खुले/नखुलेको आधारमा यौ’नस’म्पर्क भए/नभएको आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरिएको पाइन्छ । माथि उल्लेखित सोच गलत हुन् ।
खास गरी उमेर पुगेपछिमात्र विवाह गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको अहिलेको समयमा माहिलाको यो’नीको मुखमा बाल्यकालदेखि वा जन्मदेखि रहने जा’लो यौ’न स’म्पर्कबाहेक दौडधुप, खेलकुद, पौडी, साइकल चलाउने वा अन्य यस्तै गतिविधिका कारणले पनि फु’ट्न सक्ने हुनाले पहिलो यौ’नस’म्पर्कको बेलामात्रै यो फु’टेर रगत आउनुपर्छ भन्ने कुरा सत्य मान्न सकिँदैन ।
त्यस्तै पुरुषको लिं’गको छाला यौ’नसम्पर्क पछिमात्रै फा’ट्छ वा खुल्छ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन । त्यसकारण विवाहअगाडि यौ’नसम्पर्क राखेरनराखेको हुरा स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा से’क्स गर्ने व्यक्तिबाहेक अरूले पछि थाहा पाउन सक्दैन ।
यौ’नसम्पर्क राख्दा यो’नी खुकुलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत हो । यो’नी आवश्यकताको बेला र’क्तसञ्चालनको कारण आफैँ खुकुलो र कसिलो हुने अं’ग हो । महिलालाई यौ’न उत्ते’जना नभएको बेला यो’नीमार्गमा एउटा औँला पनि प’साउन अ-प्ठ्यारो हुन सक्छ भने यौ’न उ’त्तेजना भएको बेला कुनै पनि आ’कारको लिं’ग यसभित्र पस्न सक्छ । अझ बच्चा पाउने बेलामा बच्चा पाउने हदसम्म पनि खुकुलो हुन सक्छ । यो सबैले बुझेको कुरा भयो ।
जसरी आवश्यक भएको बेलामा यो’नी खुकुलो हुन सक्ने कुरा वैज्ञानिक सत्य हो, त्यसै गरी यौ’नसम्पर्कपछि यो’नीले आफ्नो पुरानै त’नाव र आकार ग्रहण गर्ने कुरा पनि वैज्ञानिक सत्य हो । यसका लागि एउटा उदाहरण दिँदा कुरा बुझ्न अझ सजिलो होला । ठूलो गाँस खाना खाएर मुख वा खाएको कुरा पेटसम्म लैजाने खाद्यनली खु-कुलो वा ठूलो हुन्छन् र हुँदैनन् नि । त्यसैले यौ’नसम्पर्कपछि यो’नी खुकुलो हुँदैन । – शुक्रबारबाट
Prevनायिका वर्षाले सिवाकोटी किनिन् साढे २ करोडमा अपार्टमेन्ट
Nextघरमा यी ४ काम गर्नुहोस, सदैव लक्ष्मीको वास हुन्छ
पल शाहको भबिष्य डामाडोल हुन् सक्ने, १४ वर्ष कैxद स,जायको माग दाबीसहित तनहुँ जिल्ला अदालतमा मुxद्दा दर्ता
उच्च अदालतले दिएको निर्णय यस्तो आयो,उल्टै समिक्षालाई यस्तो आ पत पर्दै (भिडियो हेर्नुस्)